ခွန်အောင်နိုင် – ရွဉ်တလီ,ကျမ်, သီချင်းခွေ | ပြည်ထောင်စုထဲက ''ပအိုဝ်း''
Last 30 days: 13,103
မင်းမင်း on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများမင်းမင်း on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများAdmin-Khun on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများAdmin-Khun on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများမင်းမင်း on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများမင်းမင်း on တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နှင့် သီချင်းများmusoungmyatmoe(pinlaung) on ကာတွန်းစွို, (Cartoon-Band)musoungmyatmoe(pinlaung) on ရက်သ,ရဲုင်း (ခွန်တူးလေး + နင်;မိုးမိုးစံ) အခွေသစ်ခွှန်ခမ်းခွန် on ခွန်ထွန်းမောင်နှင့် ခွန်ပေါရန်းတို့၏ ရှေးသီချင်းများkhunchitmoe on နာ,နောဝ်, .. ခွေဖ၀ – ခွန်တူးလေး	မိတ်ဆွေများနှင့် Link အချို့
www.paohmp3.com Go Live !!! »
ခွန်အောင်နိုင် – ရွဉ်တလီ,ကျမ်, သီချင်းခွေPublished December 29, 2011 | By Admin-Khun	ညီအစ်ကိုများ တောင်းဆိုထားတဲ့ ခွန်အောင်နိုင်ရဲ့ GoodBye သဲင်ပျော;ပျော; သီချင်းပါ အခွေကို တင်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အလည်ရောက်လာ Comment ပေးပြီး တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက် ခွန်ပအိုဝ်းမှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းအခွေကို VCD Version အနေနဲ့ ခွန်ပအိုဝ်းရဲ့ Youtube Channel (www.youtube.com/khunlazer) မှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(၅) GoodBye သဲင်,ပျော;ပျော;
(၁၀) ကမ်းနာ,သ, (ခေတ္တ၀င်,ခို)
Posted in ပအိုဝ်းသီချင်း	14 Responses to ခွန်အောင်နိုင် – ရွဉ်တလီ,ကျမ်, သီချင်းခွေ	ုkhontunzaw says:	April 24, 2013 at 9:19 pm	ခွန်အောင်နိုင်ရဲ့သီချင်းတွေအားလုံးနီးနီးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဗျာ။ ( ခွန်ထွန်းဇော် ) ခမ်းဒေါမ် သထုံ
Reply	ခွန်လရောင်လေး says:	July 7, 2012 at 1:31 am	အပစ်ကို flash player ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲ ပြောပြပါလား ပျောက်သွားလို့ဗျ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေ သီချင်းတွေနားထောင်ချင်နေတာ နားမထေညင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်လေ
Reply	khun lwin myo aung says:	January 21, 2012 at 2:18 pm	သီချင်းတွေ ကို ကူးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။Download လုပ်ချင်လို့ ပါ။
khun lwin myo aung(Quote)
Reply	khunmyo says:	May 2, 2012 at 7:52 pm	internetdownload နဲဒေါင်းပါ ညီ။ http://www.nyinaymin.org/2012/04/internet-download-manager-610-build-2.html အဲ့မှာဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။
Reply	Admin-Khun says:	May 2, 2012 at 10:33 pm	Thanks Khunmyo Admin-Khun(Quote)
Reply	Admin-Khun says:	May 2, 2012 at 10:33 pm	သူငယ်ချင်း ခွန်လွင်မျိုး … http://www.paohmp3.com/?page_id=218 ဒီလင့်မှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်လို Download လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ Pa-Oh MP3 Site မှာပဲ ဒီသီချင်းကို Download လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဟောဒီက လင့်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ http://www.paohmp3.com/?p=19 ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ။ အဆင်မပြေရင် မှတ်ချက် ထပ်ပြီးတော့ ချန်ထားနိုင်ပါတယ်။ အလည်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
Reply	KAMH says:	January 15, 2012 at 1:04 pm	နီလူးဖဲုင် သီချင်း ကို video နဲံ့ လိုချင်လို့ မေးနဲ့ ပို့ပေးလေ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြချင်လို့
Reply	Khun Zaw Oo says:	January 5, 2012 at 5:11 pm	Dear Khun Lazer.
Can You Post Khun Ttoo Lay and Khun Yel Thwe song, they sing together ( rock and rock ). i can watchafew song on youtube. so kindly can you upload the song for it. best wish.
Reply	KhunLazer says:	January 5, 2012 at 9:32 pm	Hi Bro Khun Zaw Oo .. Let me look for it .. I will get back to you later .. Thanks for the comment KhunLazer(Quote)
Reply	khunaung says:	January 4, 2012 at 10:36 pm	hi thank you so mush for you place me on line so that i can feel happy
Reply	myo mg mg says:	January 1, 2012 at 1:29 pm	Hi! Bro, Happy New Year! I would like to makearequest that if u haveachance pls post Pa-Oh songs 2vcds name Bankkok 1,2 online. thanks you.
myo mg mg(Quote)
Reply	ခွန်လေဇာ says:	January 1, 2012 at 10:56 pm	Hi Bro Myo MgMg, I have the two VCDs that you have mentioned above … I will post it at our Youtube Channel -> (www.youtube.com/khunlazer) .. Happy New Year too bro !! all the best …
Reply	Khun Zaw Oo says:	December 31, 2011 at 4:06 pm	I really appreciated and thank you very much to all my brother vs sister who are working hard to upload and post my favorite Pa-Oh singer song. thankalot.
Reply	KhunLazer says:	January 1, 2012 at 12:17 pm	You are most welcome bro .. Khun Zaw Oo .. we glad to hear that you are enjoying here .. Thanks for coming …